Nkọwa ihe omimi Otu esi esi mepụta nyocha na nchịkọta Google
Nchịkọta Google bụ ọrụ a ma ama na nke ọma nke na-enye gị ohere ịlele nkọwa na ozi niile yana ndekọ nke otu ndị ọrụ na-eme omume na ebe nrụọrụ weebụ gị. Nchịkọta dị na Google Analytics dị mfe ịtọlite ​​ma nwee ike ịmepụta n'oge ọ bụla. Lee ị nwere ike wepu ma ọ bụ tinye data gị nchịkọta na-akọ banyere. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ịmepụtara ihe nzacha nke na-ewepu IP ole na ole na usoro ederede nke ndị editọ gị, mgbe ahụ, ọ nwere ohere na ndị nzacha gị adịghị arụ ọrụ nke ọma ma bụrụ nke gbanwere n'oge ọ bụla o kwere omume. Ị nwere ike ịmepụta ihe nzacha nke na-ewepu data si obodo ma ọ bụ obodo.
Ross Barber, Semalt Onye ahịa na-ahụ maka nchịkwa ahịa, na-ekwu na site na nzacha na Google Analytics, ọ ga-ekwe omume ka onye ọ bụla tinye ma ọ bụ wepụ weebụsaịtị, wepụta àgwà nke echiche ha na hits. Nchịkọta Google na-enye gị ohere dị ukwuu ịkọwa ihe nzacha gị site na ozi bara uru na bara uru..Ị nwere ike ịhazigharị ntọala ahụ ma mee ka ọ dịkwuo elu ka ị nweta nsonaazụ kachasị mma ma dị mma.
Mepụta nhazi ahọrọ ma ọ bụ nhazi nhazi
Maka ịmepụta nhazi nhazi ma ọ bụ nhazi nhazi, ị kwesịrị ikwe ka nchịkọta Google gị oge ụfọdụ ka o wee nwee ike ịkwadebe akụkọ maka gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere ebe nrụọrụ weebụ na-ere ngwaahịa ụmụ ọhụrụ ma ịchọrọ inweta echiche site na obodo ma ọ bụ obodo ụfọdụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-ewepu ebe ndị ọzọ niile ma dozie ntọala gị. Ọ gaghị abụ ihe ọjọọ ikwu na nchịkọta omenala nwere ọtụtụ nhọrọ na atụmatụ ịhọrọ site. Ha na-ahapụ gị ka ị debe ihe nzacha gị na ụzọ ị nwere ike isi wepu ma ọ bụ tinye nleta ndị dabere na ihe nchọgharị na ebe, njikọ ọsọ ha, ọdịdị ala, na àgwà ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị haziri ihe ndekọ akụkọ mpaghara site na saịtị gị, ị nwere ike iyo ndị ọbịa si obodo ma ọ bụ obodo gị iji nweta nsonaazụ kwesịrị ekwesị.
Họrọ bọtịnụ redio maka ụdị ntinye gị kachasị mma
Ọ dị ezigbo mkpa icheta na ị ga - ahọrọ bọtịnụ redio mgbe niile maka ụdị ntanetị gị iji nweta nchọta rịọrọ. Ha na-agụnye ma wepu nhọrọ ka ị dee ụfọdụ data, ma ị nwere ike ịkwadebe akụkọ Google Analytics dịka ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka ndị ụfọdụ nke obodo ma ọ bụ obodo ụfọdụ gaa na ibe weebụ gị, ịnwere ike igbochi adreesị IP ha. Maka nke a, ị kwesịrị ịdebanye aha obodo ahụ na ngalaba ntanetị wee pịa bọtịnụ ịkwụsị. Ọzọ, akara ala na mkpịsị aka ukwu ka ị dee ụfọdụ data maka gụnyere ma ọ bụ wepu na nzacha. Ọ bụrụ na ịnweghị ka obodo ụfọdụ gafee ma ọ bụ hụ na ebe nrụọrụ weebụ gị, ịnwere ike igbochi obodo ndị ahụ site na ịpị aha na mpaghara gụnyere. Nhọrọ a bara uru maka ndị chọrọ mgbasa ozi mba-echebara ihu na ibe weebụ ma chọọ ijide n'aka na ihe niile bụ eziokwu, ezigbo ma ruo akara ahụ. Ihe "Search na Replace" nhọrọ ka ị na-ahazi ụzọ e si egosipụta data gị na Google Analytics. Ị nwere ike ịkekọrịta nkebi a n'ime edemede dị iche iche dabere na ihe ị chọrọ ma nwee ike dochie ihe nzacha adịghị arụ ọrụ na ndị nọ n'ọrụ maka ihe ndị ọzọ kachasị mma na nsonaazụ kachasị mma Source .